कथा : अन्त्यहीन कथा - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कविता : महोत्सव
कविता : स्पष्टिकरण →
कथा : अन्त्यहीन कथा
Sahitya - sangrahalaya | November 6, 2016
कती पटक पढियो : 125
मलाइ थाहा छ तपाइहरु कथा पढ्ने तरखरमा हुनुहुन्छ । तर यो कथा होइन । सूर्यबाट खसेको समयको टुक्रा हो यो जहाँ रातको मात्र होइन दिनको अनुहारमा पनि कालो पोतिएको छ । त्यही कालो समयलाइ प्रकाशमा ल्याउन यहाँ कथा नाम दिइएको छ उज्यालोका कथित ठेकेदारहरुलाइ झुक्याउन ।कथा कहिले सुरु भयो त्यो अहिले पनि रहस्यकै गर्भमा छ । विद्वान्हरु भन्छन् यो कथा वैदिक कालदेखि नै सुरु भएको हो । तर आज लोकतान्त्रिक युगको कथा सुनाउँद्छु जहाँ मानवअधिकार मात्र होइन महिला अधिकारका रक्षकहरु पनि बग्रेल्ती छन् । अब कथा सुरु गरौं ।
जसरी परम्परागत कथाहरु अकस्मात् सुरु हुन्छन् त्यसै गरी यो कथा पनि अकस्मात् सुरु हुन्छ । एक रात अकस्मात् मेरो निन्द्रा भङ्ग भयो । बिस्तारै आँखा उघारें मेरी श्रीमती कुममा कोट्याइरहेकी थिइन् ।’के भो’ निन्द्रा बिथोलिएकोमा मलाई रिस उठेको थियो । त्यो रिसको केही मात्रा मेरो आवाजमा पनि घोलिएको थियो ।
कविताले कानमै मुख जोतिन् ‘बिस्तारै बोल्नुस् न’
‘किन र के भो’ अब भने म सावधान भएँ । मेरो निन्द्रा हराइसकेको थियो ।’उठ्नुस् न ।’ उनी फुसफुसाइन् ।
म आँखा मिच्दै उठें र सिरानमा राखिएको मोबाइल झिकेर हेरें साढे ११ बजेको रहेछ । मोबाइलको मधुरो प्रकाशमा मैले कविताको अनुहार नियालें उनका आँखामा भय र थोरै आक्रोश समेटिएको थियो ।
‘तिमी डराएकी छौ । डरको कारण के हो’ उनको भयग्रस्त अनुहारमा आँखा गाडेर मैले प्रश्न हुत्याएँ ।
‘आज फेरि…।’ उनको वाक्य पूरा भएन ।
‘आज फेरि अनि के त ‘ मेरो प्रश्नको जवाफमा उनी बोलिनन् । मेरो दाहिने हात समातेर तान्दै भु्यालमा पुर्याइन् र चौकतिर औंला तेस्र्याइन् । दॄश्य देखेर म झस्किएँ । हाम्रो कोठा दोस्रो तलामा थियो । घर दक्षिणपट्टि फर्किएको भए पनि पूर्वपट्टिको भुयालबाट चौकको सम्पूर्ण भाग स्पष्ट देखिन्थ्यो । हाम्रो घरदेखि दक्षिण-पूर्वमा एउटा सानो गुम्ती थियो । गुम्तीको दाहिनेपट्टि सानो भाग थियो जहाँ सडक-बत्तीको उज्यालो पुग्दैन थियो । त्यही कालो भागमा केही काला आकृतिहरु चल्मलाइरहेका थिए । मेरी श्रीमती मलाइ र त्यही दृश्य देखाइरहेकी थिइन् ।
यस चौकका लागि यो नयाँ दृश्य होइन । केही हप्ता वा केही महिनाको अन्तरालमा यस्तो दृश्य दोहोरिरहन्छ । कहिलेकाहीँ त हप्तामै कैयौंपटक दोहोरिरहन्छन् ।
सडक-बत्तीको एक टुक्रा प्रकाश भुयालबाट कोठामा पोखिएको थियो । त्यही मधुरो प्रकाशमा मैले श्रीमतीको अनुहारमा हेरें त्यहाँ कुनै भाव थिएन । उनी एकोहोरो त्यो दृश्य हेरिरहेकी थिइन् । मैले उनलाई तानेर ल्याएँ र खाटमा बसाएँ । उनी अझै पनि केही बोलिरहेकी थिइनन् ।
‘कविता’ उनको जीउ समातेर हल्लाउँदै मैले मधुरो स्वरमा बोलाएँ ।
‘हँ॥’ उनी झस्किइन् ।
‘कहाँ हरायौ तिमी’ मैले प्रश्न गरें ।
‘हामी यो दृश्यलाइ रोक्न सत्तैुनौं’ उनी आफ्नै सुरमा थिइन् । शायद मेरो प्रश्नप्रति उनको कुनै ध्यान थिएन ।
‘तिमीलाइ थाहा छ यहाँको लागि यो कुनै नयाँ कुरा होइन ।’ मैले सम्झाउने प्रयास गरे ‘यस्तो कुरामा अनावश्यक चासो नलिनु नै उचित हुन्छ ।’ उनले कुनै प्रतिवाद गरिनन् । मलाइ थाहा छ मेरो भनाइले उनको चित्त बुझेको थिएन । तर हामी लाचार थियौं वा लाचार नभए पनि आफूलाई लाचार ठानिरहेका थियौं ।
कविताले विद्रोह गर्नु पर्थ्यो तर त्यसो भएन । मैले पनि त विद्रोह गर्न सकिनँ । उनले विद्रोह गरेकी भए यस कथाले अर्कै रुप लिन्थ्यो । तर उनले परम्परालाइ चुनौती दिने आँट गरिनन् र कथाले अर्को रुप लिन पाएन । त्यो दृश्यका प्रत्यक्षदर्शी हामीमात्र थिएनौं । हामीलाइ थाहा छ चौकवरिपरि ठडिएका घरका भु्याल-भु्यालबाट महिला-पुरुषले त्यो दृश्य हेरेका छन् वर्षौ देखि हेर्दै आएका छन् । तर दृश्यमा कुनै परिवर्तन भएको छैन ।
भोलिपल्ट स्थानीय भद्रभलाद्मी र बुद्धिजीवीबीच राति देखिएको दृश्यबारे बिहानैदेखि चर्चा र छलफल चल्न थाल्यो । उनीहरु सबै चा्ैकको एउटा चिया पसलमा भॆला भएका थिए र समस्या समाधानका उपाय खोजिरहेका थिए । अन्दाजी २२÷२३ वर्षकी एउटी लठेब्री त्यहीँ एउटा कुनामा बसेर चिया खाइरहेकी थिई र आफ्ना घिनलाग्दा पहेंला दाँत देखाएर बेला-कुबेला अना्ैठो आवाज निकालेर हाँसिरहेकी थिइ । भलाद्मीहरुको चर्चाको विषय पनि उही नै थिई अर्थात् अघिल्लो रात देखिएको दृश्य उसैसँग जोडिएको थियो ।
त्यस लठेब्रीका आफन्त र घरको कुने ठेगान थिएन । ऊ त्यस चौकमा कहाँबाट र कहिले आइपुगी यसको जानकारी पनि कस्लाई थिएन । ऊ यसलायक पनि त थिइन ऊ कतैबाट चौकमा आइपुगेकी थिई । सम्भवतः वैदिक कालदेखि नै ऊ यसै गरी चौक-चौकमा घुमिरहेकी छे । चौकवरिपरिका हुटेल र घरका मानिसहरुले दया गरेर दिएका चोखो-जुठो खानेकुरा खान्छे र खुला आकाशमुनि चौककै कुनै कुनामा बसेर लोकतन्त्रलाइ गिज्याइरहन्छे ।
अघिल्लो रात त्यही लठेब्री बलात्कृत भएकी थिई । चार÷पाँचजना भुस्तिघ्रेहरुले उसलाइर्् लुछेका थिए । चौकमा बारम्बार दोहोरिरहने दृश्य यही हो । तर यो दृश्यलाइ रोक्न अग्रसर हुने आँट अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेका छैनन् । ती गुन्डा केटाहरुसँग शत्रुता गर्न जोखिमपूर्ण हुने विषयसँग सबै परिचित थिए । चलचित्रमा भए नायक जन्मिन एक मिनेट पनि लाग्दैन । तर यो वास्तविक संसार हो । वास्तविक संसारमा नायकको जन्म हुन एक युग पनि छोटो हुन्छ ।
हो यसरी त्यो लठेब्री बारम्बार बलात्कृत भइरहेकी थिई र सभ्य समाजलाइ चिन्तित बनाइरहेकी थिई । हरेक बलात्कारपछि त्यो लठेब्री प्रायः गर्भवती हुन्थी र त्यो गर्भ नै समाजका भद्र नागरिकहरुका लागि चिन्ताको विषय हुन्थ्यो । बलात्कार फलस्वरुप त्यो लठेब्री चारपटक आमा बनिसकेकी छे । ती चारैवटा शिशुको ‘बोझ’ समाजमाथि थपिएको छ । चारै शिशु अहिले अनाथालयमा छन् ।
समाज थप ‘बोझ’ बोक्न चाहँदैन थियो । त्यसैले हरेक बलात्कारपछि उसको गर्भमा हुर्किने भ्रुणको हत्या गर्न थालिएको थियो । भ्रुण-हत्याको क्रम पनि लामो भइसकेको थियो । त्यसैले समाजका भद्र नागरिकहरु यो अन्त्यहीन शृङ्खलाबाट पनि मुक्ति चाहन्थे । त्यसै क्रममा भद्रभलाद्मीहरु चिया पसलमा भेला भएका थिए । समाधानका थुप्रै उपाय आए तर लठेब्रीको सुरक्षा उनीहरुको एजेन्डा बन्न सकेन । अन्ततः एउटा सुझावमा सबै सहमत भए । जस्तो कि हरेक समाजमा केही ‘जान्ने-बुझ्ने’ मानिस हुन्छन् त्यहाँ पनि त्यस्ता मानिसको अभाव हुने कुरै भएन । तीमध्ये एकजनाको सुझाव यस्तो थियो लठेब्रीलाइ अस्पताल लगेर पाठेघर झिक्न लगाउने ।
सबैभन्दा उपयुक्त सुझाव यसैलाइ ठहर्याइयो । गर्भपतनको झन्झटबाट मुक्त हुने यसभन्दा उपयुक्त उपाय अर्काे थिएन । उसलाई तत्कालै अस्पतालमा लगेर भर्ना गरियो । महिला अधिकारका पक्षमा वकालत गर्ने एउटा गैरसरकारी संस्थाले खर्च व्यहोर्ने जिम्मा लियो । लठेब्रीलाइ पाठेघरविहीन बनाउन समाजका सबै अङ्ग परिचालित भए समाजसेवी र जनप्रतिनिधिहरु पनि सकि्रय भए । एउटी असहाय र अबलालाई ‘उद्धार’ गर्न पाएकामा सबै गौरव गरिरहेका थिए । केही दिनपछि लठेब्री पाठेघरविहीन भर्इ । चिकित्सकहरुले शल्यकि्रया गरेर उसको पाठेघर झिकिदिएका थिए । उसलार्इ फेरि त्यही चा्ैकमा ल्याइयो र पहिलेजस्तै खुला आकाशमा छोडियो ।
त्यसपछि पनि उसको दिनचर्यामा कुनै परिवर्तन आएन । सडक-बत्तीको उज्यालो नपुग्ने कालो छायाँमा काला आकृतिहरु फेरि पनि चलमलाइरहे । तर समाजका भद्र नागरिकहरु भने अब ढुक्क भएर निदाउन थालेका थिए किनभने आफूलार्इ ‘बोझ’ हुने शिशुको जन्म हुने खतरा अब थिएन । मेरी श्रीमती भने अहिले पनि एकोहोरिन्छिन् र झ्यालमा बसेर दृश्य हेरिरहन्छिन् । शायद हरेक घरका झ्यालमा महिलाहरु यसै गरी उभिएका छन् र नयाँ युगलार्इ भित्र्याउने तयारी गर्दैछन् ।
कथा अहिले पनि जारी छ । कहिले होला यसको अन्त्य !
विधा : नेपाली कथा | Rajesh Bidrohi. यस रचनालाई बूकमार्क गर्नुहोस् ।